बिचराʼ ! दाइजोका कारण ७० बर्षे बृद्धसंग बिबाह गर्न बाʼध्य २० बर्षे युवती , – Namaste Host
March 18, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on बिचराʼ ! दाइजोका कारण ७० बर्षे बृद्धसंग बिबाह गर्न बाʼध्य २० बर्षे युवती ,
आमा दिनरात रुदै हिड्नु हुन्थ्यो जसोतसो ६०, ७० हजार रिन काडेर आफ्नो उपचार गराएको सम्झिदा अझै आँसु झर्ने बताइन । आफू चौधरी भएकाले बिबाह गर्दा धेरै दाइजो खोज्ने र आफुसङ दाइजो दिनलाई केही नभएपछी आफुसंग उमेर मिल्ने केटोसङ बिहे गर्ने त सपना मात्र भएको सम्झेर बाध्यताले वृद्धसंग बिहे गरेको बताइन ।
उता वृद्धकि पनि जेठी श्रीमतीको मु*टुको रो’गका कारणले नि’धन भएपछी एक्ला बनेका वृद्धलाई साहराको खाचो थियो । दुबैजना दुख पाएका भएकै कारण बिबाह गर्नुपरेको उनिहरुले बताए